Pclinux os, safidy tsara ho an'ny mpampiasa iraisana | Avy amin'ny Linux
pandev92 | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Tadidiko ny fahavaratra lasa teo, toy ny isan-taona nandehanako nanao vakansy tany Italia, tamin'io fotoana io dia mbola nampiasaiko ihany Archlinux Ary satria tsy misy Internet ao an-tranon'ny fianakaviako, dia voatery nividy fanalahidy 3g Usb aho. Tadidiko fa nanandrana nifandray tamin'ny Arch aho, saingy ny valiny mitovy hatrany, tamin'ny farany dia tsy nifandray tamin'ny tamba-jotra Vodafone.
Avy eo tadidiko ny distro izay efa tonga niaraka tamin'ny fitaovana vonona, ary satria niaraka tamiko ilay disk dia napetrako. Ny valiny dia afaka nifandray avy hatrany avy eo amin'ny foiben'ny tambajotra aho OS PClinux. Rehefa niverina avy nanao vakansy aho dia voafafa PCLinux Ianao indray, tamin'io fotoana io dia mbola liana ny hanoroka aho, fa tamin'ny fiafaran'io fotoana io dia nanomboka nampiasa aho Windows 7 amin'ny lohahevitry ny institiota (fidirana, excel ary point point power) ary avy eo vitako ny fametrahana OS X.
Niverina ihany aho tamin'ny farany Linux, Nametraka ny LTS an'ny ubuntu 12.04 ary rehefa afaka 4 andro nampiasako azy dia nisy fanavaozana mahatsiravina nahatonga ahy tsy afaka nahare ny feo, afa-tsy ny headphones ary ny bug izay notateriko dia mbola misokatra ...
Dia nanandrana aho Debian ary na dia tsy ratsy aza, tsy ho ahy izany, ny fametrahana ireo mpamily tompon'ny AMD Toy ny mahazatra rehefa mampiasa an'i Debian aho dia tsy afaka tamiko izany, rehefa averiko indray ny pc dia mihetsika miadana ny zava-drehetra, tsy maintsy miahiahy momba ny fandaozana ireo loharano, ny dock sy zavatra hafa izay tsy mety amiko intsony ary tadidiko OS PCLinux.
OS PClinux Izy io dia efa manana mpamily cat cat ati-doha, ary mampino ny fampisehoana azoko tsara lavitra noho ny amin'ny disto hafa, tsikaritro haingana kokoa ihany koa ny birao miaraka amin'ny kernel bfs.
Ny olana dia tsy mety io distro io * dikan-teny *, mbola mampiasa KDE 4.6.5 fa amin'izany dia mahazo fitoniana lehibe isika. Nampiaiky volana ahy ny fampisehoana sary, fa tamin'izany fotoana izany nahagaga ahy ihany ny mahita ny fahitako farany ny sarimihetsika misy haingam-pandeha xvba vaapi, Tsy mijaly bebe kokoa amin'ny rovitra aho, izay any Ufiafarana na firy na firy na firy ny safidiko compiz, tsy azoko esorina.
Miaraka amin'ny farany Libreoffice, VLC 2.0, ny foibe fanaraha-maso an'ny OS PClinux izay mahafinaritra, ny fisehoany amin'ny toerana misy anao koa, miaraka amin'ny apt ho mpitantana fonosana, ny karazana rindrambaiko rehetra ao amin'ny trano fitehirizana, toy ny monodevelop, qtcreator, kdevelop ary ny fisian'ny kernel bfs, mahatonga ity Rolling Release distro ity ho safidy tsara ho an'ny mpampiasa iraisana, izay mampiseho amintsika fa azo atao ny fitoniana sy ny famotsorana.
Sintomy ny pclinux OS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Pclinux os, safidy tsara ho an'ny mpampiasa iraisana
Ny famakiana ny pejy About PCLinux OS dia milaza fa mampiasa OpenOffice izy, efa lany daty ve sa iray amin'ireo distros kely mbola ahitana an'io?
Mamaly ny tenako aho, ao amin'ireo pejin'ireo kinova roa ireo dia miresaka momba ny installer LibreOffice, LibreOffice Manager, noho izany dia pejy efa lany andro «Momba ny PCLinux OS»
Rehefa, herintaona mahery lasa izay, dia nanapa-kevitra ny hiala tamin'ny Ubuntu aho ary hanandrana safidy hafa, ity dia iray amin'ireo distros voalohany nampiasako. Tena tiako ny malefaka sy ny hafainganam-pandehany, na dia hitako aza fa ny KDE dia tsy niasa toy ny tamin'ny disto hafa. Tsy azoko odian-tsy hita fa nahafantatra ny fitaovan'ny solosaina findainy rehetra tsy nisy olana. ny hany lesoka nitranga tamiko dia ny sary: ​​nandritra ny fanombohana dia niova ny vahaolana ny lamba ary tokony hataonao ny fanovana tanana raha vao nanomboka ny rafitra. ivelan'izany, tsy misy hafa. lozisialy maro be misy, fanavaozana tsy tapaka, ary fitoniana be. iray amin'ireo tiako indrindra !!!
oh ary adinoko, nanaitra ny saiko ny mahita ny tenako synaptic, hehe, nahafinaritra izany.
Avy any Mandriva aho dia nampiasa ity distro ity tamin'ny fizarazako Linux nandritra ny fotoana ela ary tena tsara izany. Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra, haingana sy maharitra an'ny KDE hitako. Navelako izany noho ny fanapahan-kevitry ny sasany namorona azy, Texstar, tsy hanavao ny KDE, na ireo programa toa an'i Amarok.
Mahatoky hatrany amin'ny KDE, izao dia mizaha toetra ny Kubuntu 12.04 aho ary tsy dia maharesy lahatra ahy izany. Angamba andramo ny Mageia 2, na miverena any amin'ny PCLinuxOS ary mifoka ireo hetahetan'ny Texstar.
Nanandrana ny OpenSUSE ve ianao? Ianao no manana ny farany KDE (ny fanavaozana ny KDE 4.8.4 dia tonga tamiko omaly), ny kinova farany misy amin'ireo rindranasa rehetra misy sy misy, ary manana fitoniana lehibe izy io.
Izaho dia mpampiasa Mandriva sy PCLinuxOS ihany koa, ankehitriny dia mpampiasa OpenSUSE aho ary ny marina dia faly kokoa amin'izany aho.
Mahaliana ny fomba fijerinao ary zarako tanteraka izay lazainao. Na dia tsy nampiasa Pclinux OS mihitsy aza aho dia efa nandalo ny dingana niadiako tamin'ny rafitra sy nametraka zavatra iray isaky ny mandeha. Virtualized Arch aho, izay tsy napetrako mihitsy tao anaty kapila, nianjera indroa ny rafitra ho an'ny fanavaozam-baovao ao amin'ny milina virtoaly, noho izany dia hariako mivantana. Mpampiasa sy mpiaro an'i Debian aho saingy tsy maintsy ekeko fa tsy natao ho an'ny mpampiasa farany izany, ny rafitry ny metapackage dia aretin'andoha raha te hanana programa vaovao ianao.
Toa an'i @VaryHeavy heveriko fa fizarana lehibe ny OpenSUSE ary sahiko ny milaza fa io no marin-toerana indrindra mifantoka amin'ny mpampiasa antonony. Rehefa nametraka azy aho dia nanao izany tamin'ny fikasana handrava azy dia nampiditra repositories ivelany (mitovy amin'ny ppas Ubuntu ) Nampidiriko aza ny toeram-pivarotan'ny orinasa kde ary raha lasa tsy milamina ny rafitra dia azonao atao ny miverina amin'ny repo fampivoarana ohatra ny zypper dup tsotra avy amin'ny-repo-tadiavinao na mitsidika ny Build Service ary manana rafitra miaraka amin'ireo fonosana farany ianao. Tokony holazaina fa maro ny distro izay mampiasa KDE, anisan'izany ny Chakra dia mandray ireo fonosana fampidirana kde avy amin'ny OpenSUSE… .amin'ny nahazatra ahy fa nandeha tangentika aho haha.
izay lazainao momba ny repos openSUSE no tena tiako indrindra.
zypper miakatra avy eo amin'ny repo…
Zypper hatrany amin'ny LEEEENTO xD
Zypper dia nanana bibikely lalina izay notateriko fa tsy fantatro raha nanavao azy ireo izy ireo, fa rehefa nanana ny 30 megabytes vdsl avy amin'ny Movistar Spain aho dia nampiasa ahy ipv6 ny zypper, ary na dia nanidy ipv6 aza ny rehetra, dia nandeha hatrany amin'ny 50 fotsiny ny zava-drehetra kb / s, orinasa niova izy io ary nijanona tsy nisy intsony izany, ary tsy nisy namono ahy.
Niadana izy io. Zypper dia nihatsara be ary miasa tsara izao, misintona haingana dia haingana ny fanavaozana andiany lehibe.
Ny filazana fa ny fampidirana ny delta-rpm dia nitana ny andraikiny tamin'ny fanatsarana ny fitantanana ireo fanavaozana ihany koa, satria ny ampahan'ny fonosana resahina izay novaina ihany no nohavaozina, ka hialana amin'ny fisintomana fonosana feno sy hanafahana betsaka ny fampidinana. fifamoivoizana.
Ka mbola tsy nanandrana ny openSUSE ianao nanomboka oviana?
Nametraka azy io tamin'ny farany tamin'ny 11.4 aho, tao amin'ny 12.1 ny USB mivantana dia tsy mandeha tsara na dia ataoko amin'ny baikon'ny dd aza, ary rehefa mametraka crashea ...
Azonao atao ny manandrana azy amin'ny rindranasa "Imagewriter", izay ao amin'ny tahiry OpenSUSE, avy amin'ny masinina virtoaly ohatra. Amin'ity fampiharana ity dia tsy ho diso ny Live USB.
Hanandrana amin'ny windows amin'ny vmware aho hijery hehehe .Holazaiko aminao izany.
Ataoko amin'ny dd_rescue izany satria izany no tao amin'ny wiki en.opensuse.org/SDB:Live_USB_stick fa toa izao dia miaraka dd ihany
Ny programa efa lany andro tsy manelingelina ahy raha mbola mandeha tsara izy ireo, tsy sarotra tamiko mihitsy ny nilaza izany. Saingy heveriko fa ny zavatra tokana tokony ho fantatro momba ny PC-LinuxOS dia raha ny kinova 32-bit dia miaraka amin'ny kernel PAE amin'ny alàlan'ny default, satria raha mampiasa ilay kinova 64-bit aho dia ho any amin'ny helo miaraka amin'ny zavatra maro ampiasako.
Tsy amin'ny alàlan'ny tsindry misy ny kinova bfs 32-bit izay mahalala 3,5 gigs fotsiny, ny kernel pae dia ao amin'ny fitoeram-bokatra ary azonao atao ny mametraka azy avy eo, na dia aleoko aza tsy nanao an'io fotoana io.
(Manoratra amin'ny pc hafa aho)
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ireo voany roa?
Ny kernel pae dia tokony ho kernel ara-dalàna amin'ny fiainana rehetra, ary ny bfs no natao hanatsarana ny valiny eo amin'ny birao, tsikaritro tamim-pahatsorana fa ny voan'ny bfs dia haingana kokoa noho ny voa mahazatra, amin'ity PC misy ahy ity chakra, natambatro io ary tena hitako ny mahasamihafa azy.
PCLinuxOS dia tsy manana kinova 64-bit, kinova 32-kely ihany.Voalaza fa efa ela be izay fa ny kinova 64-bit dia nomanina sy hovolavolaina, nefa tsy misy mivaingana fantatra hatreto.
Ny 64-bit iray dia eo am-pandrosoana, raha ny marina dia azonao atao ny misintona ny isos. Tena tsy tiako ny openuse, ny fomba fitantanana ny tahiry toa mahafaty ahy, satria madio kokoa ny pclinux, ankoatr'izay ny openuse dia tsy miaraka amin'ireo mpamily tompony amin'ny toerana misy anao ary ny fisehoana dia tsy hoe mitandrina tsara, izany dia madio kde.
Tsy karakaraina ao amin'ny OpenSUSE ny fisehoana? : S Tsy ekeko mihitsy, ny OpenSUSE marina dia iray amin'ireo mikarakara be indrindra sy izay mampifandray tsara indrindra ny KDE. Raha hiresaka momba an'i Fedora isika, dia tsy hiady hevitra aminao aho, satria izany dia miaraka amin'ny tontolo madio, fa tsy izany no mitranga amin'ny OpenSUSE. Ny tsy tonga amin'ny mpamily tompona kaonty dia ara-dalàna ao amin'ny ekosistra Linux.
Ary mazava ho azy ny olona, ​​raha ampitahaintsika ny tahiry OpenSUSE amin'ireo an'ny PCLinuxOS, mazava ho azy fa mifototra kokoa amin'ny PCLinuxOS izy io, raha ny marina raha tsy diso aho dia repository iray no ampiasaina amin'ny zava-drehetra. Na izany aza, azoko atao ny milaza fa tsy mahantra na inona na inona ao amin'ny OpenSUSE aho, ary ny fonosana dia havaozina isan'andro isan'andro, izay mbola tsy hitako hatreto amin'ireo distro hafa nampiasako.
Raha ny fisehoan'ny openuse izay hitako dia ny lohahevitra kde mandritra ny androm-piainana misy ambadika maintso ..., amiko izay toa tsy mitandrina ny endrika ivelany, ireo litera dia tsy mahafantatra raha diso aho, saingy izy ireo Tsy mampiseho famolavolana, ary ny repositories dia korontana, ny fotoana farany nilalaovako azy ireo tamin'ny 12.1, dia tapaka ny fiankinan-doha amin'ny programa maromaro, distro aho fa tsy hanome soso-kevitra ho an'ny olona te hampiasa azy raha tsy mianatra be loatra.
Toa tsy hitako ny mijery bika
Eny, manandrana loko ihany.
Marina fa tsy mahazo aina ny loharanom-baovao, izany no zavatra voalohany novaiko hatramin'ny voalohany, fa ny ambiny, tsara.
Momba ny repo sy ny fiankinan-doha ... eny, tsy fantatro ny fomba nanaovanao azy, satria rehefa manavao fonosana iray avy amin'ny YaST ianao dia mampitandrina anao raha misy ny fifanolanana amin'ny fiankinan-doha ary manolotra hetsika isan-karazany horaisina, amin'ny fitazonana ilay fonosana, ny fanavaozana ny fiankinan-doha na ny fanovana ny tahiry fitahirizana azy, na ny fandrobana ny fonosana mety hitranga.
Ary matetika tsy misy olana amin'ny trano fitahirizana, na firy na firy, fa tsy maintsy dinihinao ihany koa hoe iza no ampiana, ohatra, tsy afaka mampiasa ireo repository kinova mahazatra ianao amin'ny fotoana mitovy sy ny trano fivarotan'ny Tumbleweed (izay Rolling-release type), satria mazava ho azy fa amin'ny fotoana sasany dia hisy zavatra ho tapaka. Ary aza mampiasa ny repositories an'ny fanontana samy hafa an'ny KDE, izany hoe, raha manana KDE 4.7 ianao ary te hitazona azy dia aza ampidirina ny repositories KDE 4.8, na raha mametraka KDE 4.8 ianao dia esory ny repository KDE 4.7, zavatra mazava be ireo, sa tsy izany?
Ohatra, namboariko ireo tahiry mahazatra ho an'ny kinova + vondrom-piarahamonina sasany izay liana tamiko + ireo ho an'ny KDE 4.8, ary tsy manana olana aho.
Ny OS linux OS-nao dia mahatonga ahy ho OS lehibe, amin'ny APPS-ny dia tsy lany andro io fa amin'ny KDE SC, amin'ny teny vitsivitsy dia PCLOS ary tsy natao ho an'ny versionitics.
Eny, fa tsy misy fomba hijerena ny lisitry ny fonosana hahalalana hoe mankaiza ny dikanteny sy ny tantara iray manontolo.
Mikaroha xd kely fotsiny
milaza 2010 fa raha ny tena izy dia ireo no manomboka xD
pkgs.org, padawans kely 😛
Hadinoko izany antsipiriany izany ... xD
Safidy lehibe tsy misy fisalasalana, ratsy kokoa noho izany ny fijanonako any Chakra
ary izaho koa !!!! Fitsipika Chakra !!!! 🙂
Avy amin'ny hoe iza izy ary manana ny Drakes, tsy mahagaga raha niasa taminao izany 😉
Derivative of Mandriva heheh
Araka ny lazain'i pandev aminao, ny PCLinuxOS dia fork an'ny Mandriva, manokana kokoa, Mandrake 9.2 (Texar dia mpamorona Mandrake), na dia nanampy ny fanatsarana rehetra aza nanomboka ny Mandriva, indrindra ireo drakes.
Ao amin'ny Pclinuxos dia azonao atao ny manala ny fahaizan'ny aptitude na ny apt fotsiny?
APT fotsiny, arahaba.
Iray hafa izay Rolling Release 😉
Tsy isalasalana fa, fotoana vitsy lasa izay ny fitsapana, fanekena fitaovana tsara, ny kinova nampiasako dia ny kinova niaraka tamin'i LXDE.
Izy io no ho fitoniana araka ny nolazain'izy ireo tao an-tanànako fa ny maha-izaho ahy dia tsy hamelako ny helony velively amin'ny famadihana rindrambaiko maimaimpoana an'i SuSE, kely fotsiny ny Microsoft Microsoft.
Tsia, tsy manao trolling aho 🙂
Linux for Doomies I. Inona ny GNU / Linux sy rindrambaiko maimaimpoana? nohavaozina.